KPZ: General Feature
1 comments - Postacomment Labels: လေ့ကျင့်မှု
AutoCAD Software ကိုစပြီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်ကScreenပေါ်လာပြီပေါ့။ ဒီScreenက AutoCAD 2006 Versionရဲ့ Screenပါ။Versionပြောင်းလဲပေမယ်လည်း အခြေခံပုံပန်းသဏ္ဍန်တွေကတော့ တူညီကြပါတယ်။ အခုပထမဆုံး အခြေခံပုံပန်းသဏ္ဍန်ရဲ့ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကို စပြီးလေ့လာပါစို့။
( 1 ) Menu Bar
(2) Title bar
(3) Objective Properties Toolbar
(4) Text Style Control Bar
(5) Modify Toolbar
(6) Draw Toolbar
(7) Status Bar
( 8 ) Command Prompt Area
(9) Layout Tabs
(10) UCS Icon
(12) Scroll Bar
ဒီအခေါ်ဝေါ်တွေကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာပြီဆိုရင် သူတို့ကို ဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာကြတာပေါ့။။။။။။။။
jjesmin - September 13, 2008 at 7:04 PM
I interest the this autocard. Because of I'm attending this class. Long time2weeks finished.
So I continue the study the ....
Next may be I will teach my friend.
You are viewing "General Feature"
Filed under Labels: လေ့ကျင့်မှု